Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ) - Hello Sayarwon
Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ)
Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ) ကဘာလဲ။
Sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ဆိုတာ အာရုံကြောတစ်ခုဟာ ထိခိုက်ခံရလျှင် (သို့) အဆွခံရလျှင် ဖြစ်တဲ့ နာကျင်ခြင်းကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ အာရုံကြောဆိုတာက ခန္ဓါကိုယ်ထဲမှာ အရှည်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကျောရိုးမကြီးကနေစပြီး တင်ပါးဆုံ နှင့် ခြေထောက်အနောက်ထိ ဆက်ဆင်းသွားပါတယ်။
sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ဆိုတာက အခြားရောဂါသက်သက်မဟုတ်ဘဲ အာရုံကြောရောဂါရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုသာဖြစ်ပြီး ၄ ပတ် မှ ၈ ပတ်လောက်ထိ ကုပြီးလျှင် သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဖြစ်တဲ့ လူနာတွေကတော့ အသက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ နာတာရှည် ဆီးချိုသမားတွေ၊ နှင့် အဝလွန်တဲ့ သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
Sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
နာကျင်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ ထုံခြင်း၊ ကြွက်သားအားပျော့ခြင်း (သို့) အားနည်းခြင်းနှင့် ခါးကနေ တင်ပါးနှင့် ခြေထောက်နောက်ပိုင်းထိ ကျဉ်ခြင်း
ရောဂါလက္ခဏာတွေက လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကွေးခြင်း၊ အထိုင်ကြာခြင်း၊ ချောင်းဆိုး သို့ နှာချေခြင်းတို့ပြုလုပ်လျှင် ပိုဆိုးလာတတ်ပြီး လှဲလိုက်လျှင် သက်သာသွားတတ်ပါတယ်။
ပိုဆိုးတဲ့ sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ဆိုလျှင် လမ်းလျှောက်ရာမှာ ခက်ခဲနိုင်ပြီး တစ်ခါတရံ လမ်းလျှောက်လို့တောင် မရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
နားပြီးနောက် သို့ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေး သောက်ပြီးတောင် အနာ မသက်သာလျှင်။
နာကျင်ခြင်းက ၁ ပတ်ကျော် ကြာလာလျှင် သို့ ပိုဆိုးလာလျှင်။
သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် ချက်ချင်း ဆေးရုံတက်သင့်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် အပြင်းအထန် နာကျင်လာလျှင် သို့ ထုံလာလျှင်၊ ခါးနှင့် ခြေထောက်ကြွက်သားများ အားပျော့လာလျှင်။
ကားလမ်း မတော်တဆမှု ဖြစ်ပြီး ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်ရာမှ နာကျင်နေလျှင်။
ဆီးနှင့် ဝမ်းထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲလာလျှင်။
Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အဓိကဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းကတော့ ထိုးထွက်နေသော ကျောရိုးဆစ်တစ်ခုက အာရုံကြောကို တိုက်ရိုက် သွားဖိမိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောရိုးဆစ်ဆိုတာ အပြင်က အမျှင်တစ်ရှူးလွှာ အုပ်ထားသော အထဲမှာ ဂျယ်လီလို ပစ္စည်များနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အရာဖြစ်တယ်။ သူ့တာဝန်က ကျောရိုးကို ထိခိုက်မှု မရှိအောင် လုပ်ပေးတာဖြစ်သော်လည်း တစ်ခါတလေ သူ့ကြောင့် အဆစ်ကျွံခြင်းနှင့် အာရုံကြောဖိမိခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
တခြားဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကတော့။ ။ osteoarthritis (အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း) က အာရုံကြောတွေကို ရောင်စေခြင်း သို့ ထိခိုက်စေခြင်း ဖြစ်စေသော်လည်း အကျိတ်တွေ၊ ကြွက်သားတွေ၊ သွေးထွက်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးနှင့် ထိခိုက်မှု အထူးသဖြင့် တင်ပါးဆုံရိုးကျိုးခြင်းမှ ရလာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲတွေက တော့ အာရုံကြောကို ထိခိုက်စေတာ ရှားပါတယ်။
Spinal stenosis (ခါးဆစ်ရိုး အခေါင်းပေါက်ကျဉ်းခြင်း)က အာရုံကြောကို ဖိမိနိုင်တာကြောင့် sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်ကြီးခြင်း။ ။ အသက်ကြီးလာလျှင် ဖြစ်တတ်တဲ့ အဆစ်ကျွံခြင်းက sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ကို အဖြစ်များစေပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်း။ ။ ကိုယ်အလေးချိန်များခြင်းကြောင့် ကျောရိုးပေါ်ဖိအား သက်ရောက်ပြီး ဒီရောဂါ ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဆီးချို သွေးချို။ ။ ဆီးချိုသွေးချိုက အာရုံကြောထိခိုက်မှုကို မြင့်မားစေပါတယ်။
အထိုင်များခြင်း။ ။ အထိုင်များတာ ကလည်း ဒီရောဂါ ကို အဖြစ်များစေပါတယ်။
Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်တွေက သင့်အား ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေ၊ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်ပြီး ရောဂါအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ တခြား စမ်းသပ်မှုတွေက သိပ်မလိုအပ်သော်လည်း ကုသသော်လည်း လက္ခဏာတွေ မသက်သာလျှင် သို့ ခွဲစိပ်ဖို့ စဉ်းစားထားလျှင် ကွန်ပျူတာ ဓါတ်မှန်၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန် နှင့် တခြားစမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Sciatica (ပေါင်တန်းခြင်း၊ အကြောညပ်ခြင်း စိုင်ရာတီကာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
Sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ကုထုံးက ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း နှင့် နာကျင်ခြင်းအဆင့် ပေါ်မူတည်ပါတယ်။ တချို့အခြေအနေတွေမှာ ကုသဖို့တောင် မလိုအပ်ပါဘူး။
ခွဲစိပ်ခြင်း မပါတဲ့ ကုသမှုများ
ရောင်နေ၊ နာနေတဲ့နေရာ ကို ရေနွေးအိတ် သို့ ရေခဲ ကပ်ပါ။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်း ၄၈ နာရီ မှ ၇၂ နာရီအတွင်း ရေခဲကပ်သင့်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရေနွေးကပ်သင့်ပါတယ်။
အရောင်နဲ့အနာ သက်သာစေရန် စတီးရွိုက်မပါတဲ့ အရောင်ကျဆေးတွေကို သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဆရာဝန်က သင့်ကို ကြွက်သားပျော့ဆေးများ၊ စတီးရွိုက်သောက်ဆေး နဲ့ခါးဆစ်ရိုးထဲ စတီးရွိုက်ထိုးခြင်း စသည်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အပြင်းအထန် နာကျင်မှုမျိုးရှိနေလျှင် ဘိန်းပါတဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးအပြင်းစားတွေ လိုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က အနာသက်သာစေရန် သင့်ကို ရေနွေးနှင့် ရေခဲကို တစ်လှည့်စီ သုံးပြီး နှိပ်နယ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတော်တော်များများက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ စတီးရွိုက် မပါတဲံ့ အရောင်ကျဆေးတွေက ဝမ်းဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အစာအိမ်အနာပေါက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမူးခြင်း၊ နှင့် အကြားအာရုံထိခိုက်ခြင်း သို့ အဖုအပိန့်တွေ ထွက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆရာဝန်က သင့်ကို အနာသက်သာစေရန် ကာယ ကုထုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်း လုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ အပေါ်က ကုသမှုတွေနဲ့ မသက်သာလျှင် သို့ ပိုဆိုးလာလျှင် စိုင်ရာတစ်အာရုံကြော (sciatic nerve) ကို သွားဆွနေတဲ့ကျောရိုးဆစ် အပိုင်းအစ အကိုင်းအခက်ကို ခွဲစိပ်ပြီး ဖယ်ထုတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် sciatica (စိုင်ရာတီကာ) ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
နာလို့ဆိုပြီး မလှုပ်ရှားဘဲ မနေပါနဲ့။ အထိုင်များလျှင် ပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။
နေ့တိုင်း အကြောလျှော့ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းများ မှန်မှန်လုပ်ပါ။ ဘယ်လို လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာ ဆရာဝန်ကို မေးပါ။
မှန်ကန်တဲ့ အနေအထားနဲ့ အထိုင်အထ ပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်တော့မှ လက်မလျှော့ပါနဲ့။ မသက်သာလျှင် ဆရာဝန်ကို ပိုထူးခြားထိရောက်တဲ့ ကုထုံးကို မေးပါ။
Sciatica. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sciatica/basics/definition/con- 20026478?p=1.Accessed October 6, 2015.
Sciatica. https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000686.htm. Accessed October 6, 2015.Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition.